1410nm DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1410nm DFB Butterfly Laser Diode သည်ပိုမိုမြင့်မားသော output စွမ်းအား၊ ဆူညံသံနည်းခြင်းနှင့်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောလိုင်းအကျယ်စသည်တို့သည်အသုံးချမှုများစွာအတွက်ဤ semiconductor optical ဖြေရှင်းချက်ကိုနေရာချခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေးကွာသော sensing၊ ဖြန့်ဝေထားသောအပူချိန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ strain သို့မဟုတ် acoustic fiber optic monitoring, high resolution spectroscopy, LIDAR နှင့်အခြားတိကျသော metrology applications များ။
1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1410nm DFB Butterfly လေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
1410nm DFB Butterfly Laser Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
PM / SMF FC / APC၊
Built-in Optical Isolator၊
1410nm DFB ချစ်ပ်။
4. 1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1408 1410 1412 nm
6. Package ပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1410nm DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode ၏
7. 1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1410nm DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သော, Bulk, China, တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်၊ စျေးပေါ၊ စျေးနိမ့်, အရည်အသွေး